Shin-koiwa Station Tokyo(8th May)
Events • May 9, 2021
そして、大変 お忙しい中、ご協力してくださったギターリストやカメラマンの方々、誠に有難う御座います。 🙏🙏
"We will not stop, We will not go cold-blooded" ✊🏻
On today (8th of May), TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Shin-koiwa Station Tokyo.
We have to avoid the crowded places and limit the people since the infectious rate in Japan is getting higher (approximately 7000 people getting infected everyday, over 1000 in Tokyo alone) in reliance with CORONA Restriction Rules and Regulations.
We were able to hand out over 600 pamphlets and 500 pocket tissues from 1:30pm till 4:30 pm even though it was notacrowded famous station.
We didaperformance of those three songs (Spring Revolution, Thway Thit Sar, A lo Ma Shi) along with the Guitar Performance.
It really was an encouragement when Japanese didaThree fingers salute and courageous words.
We would like to express our gratitude to our beloved guitarist and photographers who came down weekly to record our actions and activity.
We will fight till we win 💪🏻💪🏻
We won't stop till we win. ✊🏻✊🏻
We are ending the spring with Victory and Victory only.💪🏻💪🏻
"ဘယ်တော့မှ သွေးမအေးဘူး၊ငါတို့ ရပ်တန့်မသွားဘူး " ✊🏻
ယနေ့ ၅ လပိုင်း ၈ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Shin Koiwa ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နေ့စဉ် လူဥိီးရေ ၇၀၀၀ ကျော် ၊ တိုကျိုတစ်ခုတည်းဆိုရင် လူဦးရေ ၁၀၀၀ကျော် Corona ကူးစက်နှုန်း မြင့်မားနေတဲ့အတွက် နာမည်ကြီးနေရာတွေကို ရှောင်ခဲ့ပြီး လူဦးရေကိုလည်းကန့်သတ်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စည်းကမ်းများနှင့် အညီ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Pamphlets လက်ခံယူတဲ့ဂျပန်ပြည်သူများ စိတ်ချရစေရန်အတွက် စနစ်တကျ လက်ဆေးခြင်း၊ လက်အိတ်များတပ်ဆင်၍ ဝေငှခြင်းဖြင့် Corona ကူးစက်မှု မပြန့်ပွားစေရန် အထူးဂရုစိုက်ပြီး လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
နာမည်ကြီး ဘူတာ မဟုတ်သော်လည်း မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲမှ ညနေ ၄ နာရီခွဲအတွင်းမှာ လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၆၀၀ကျော် နှင့် တစ်ရှူး အခုရေ ၅၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ကို ဂျပန်ပြည်သူတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး၊ သွေးသစ္စာ၊ အလိုမရှိ ဆိုတဲ့သီချင်း၃ပုဒ်ကို ဂစ်တာတီးပြီး Performance ပြုလုပ်ကာ သံပြိုင်သီဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။
ဂျပန်ပြည်သူများကလည်း လက်၃ချောင်းထောင်ပြီး အားပေးစကားများပြောပေးကြတာမို့ အားတက်ရပါတယ်။
ဂစ်တာတီးပြီး ပါဝင်အားဖြည့်ပေးတဲ့ အစ်ကိုနှင့်တကွ အပတ်စဉ် ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်းကူညီရိုက်ကူးပေးသူများအားလုံးကို TTAJ အဖွဲ့မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် 🙏
ငါတို့တွေ နိုင်အောင် တိုက်မှာ 💪🏻💪🏻
ဘယ်တော့မှ ရပ်တန့်မသွားဘူး ✊🏻✊🏻